Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2011 February 08
08 Febroary 2011
Tantara tamin'ny 08 Febroary 2011
Mpanoratra Antoun Issa · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Nivatravatra mihitsy ny tontolon'ny fitorahana bilaogy Libane amin'ny fanohanany ny hetsi-panoherana Ejiptiana izay niteraka faty olona 150 hatreto. Tsy nitazam-potsiny tamin'izao ireo Libane mpitoraka bilaogy, nefa ny tontolo Arabo no manatri-maso ny zava-misy izay mety hanova tanteraka ny aty amin'ny faritra. Toy izao no fandraisan-dry zareo azy.
Mpanoratra Gina Cardenas · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Niteraka fanehoan-kevitra samihafa ny eritreritr'i Amr Moussa, sekretera jeneralin'ny Ligy Arabo, sady mpanohana tsy misy fepetra an'i Mubarak teo aloha, ho lasa filohan'i Ejipta atsy ho atsy, raha mbola manohy miantsoantso ny fialàn'i Hosni Mubarak ny Ejiptiana efa ho 12 andro misesy izao. Ireto manaraka ireto ny sasany tamin'nyfanehoan-kevitra tao...